နားဦးတည့်ရာ(နိုင်ငံသစ် အတွက် အထူး) ရေး၊ ဆို၊ တီး၊ ဖမ်း – ဆောင်းဦးလှိုင် (ခရီးအစ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ(နိုင်ငံသစ် အတွက် အထူး) ရေး၊ ဆို၊ တီး၊ ဖမ်း – ဆောင်းဦးလှိုင် (ခရီးအစ)	10
Posted by မြစပဲရိုး on Mar 31, 2016 in Music | 10 comments
နားဦးတည့်ရာ(နိုင်ငံသစ် အတွက် အထူး) – ရေး၊ ဆို၊ တီး၊ ဖမ်း ဆောင်းဦးလှိုင်
ယုံကြည်မှု တွေ အမြင့်ဆုံးမှာ
အိမ်မက်များ ရဲ့ ဆုံမှတ်
တို့ရဲ့အမိမြေ အတွက်ဆို တို့ပေးဆပ်မယ်
စည်းကမ်းလိုက်နာ ရိုးသားပါ သူငယ်ချင်းရယ်
ဒီကမ္ဘာပေါ် တစ်နေ့တော့ ခေါင်းမော့ကာပြုံးနေနိုင်ဖို့
တောင့်တခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ရထားကြီး ထွက်ခွါ
ခရီးအစ အဆုံး ကို စေတနာ မေတ္တာထား
မြစပဲရိုး says: ဒီကမ္ဘာပေါ် တစ်နေ့တော့ ခေါင်းမော့ကာပြုံးနေနိုင်ဖို့ … တောင့်တခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ရထားကြီး ထွက်ခွါ
ခရီးအစ အဆုံး ကို စေတနာ မေတ္တာထား ..ခရီးသွားချင်းလဲ စာနာဖေးကူမ .. မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထား
မြစပဲရိုး says: နက်ဖြန် Post တင်ရင် မှတ်ချက်ပေးရင် သူကြီး က point ဘောက်ဆူး အများကြီး ပေးမယ် ဆိုလားဘဲ။
kai says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့.. MG Press Pass တွေစထုတ်ပေးနေပါပြီ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အမေ့ ကို တလေးတစား ဝန်းရံ ခဲ့ ကြတဲ့
အနုပညာရှင် အားလုံး ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတဲ့ဗျာ.. ပျော်ချက်
မြစပဲရိုး says: သူကြီးမင်း စကား ကို ဟိုက်လိုက် လုပ်ထားတယ်။
ဒီနေ့မှာ April fool လုပ်တာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ သူကြီး ပြောတာကြီး က ဖြစ်သလို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ကြီး။
” MG Press Pass” ဆိုတာ
– ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်လဲ
– ဘာကြောင့် ပေးတာလဲ
– ဘယ်သူတွေကို ပေးတာလဲ
– ဘယ်လို အကျိုးအမြတ် ရမလဲ
စသဖြင့် …. ဒါတွေ ရှင်းပြချက် မပါဘဲ စတုဒီသာကျွေးသလို အလှူပေးတာလား။
လူတိုင်း ကို ပေါပေါပေးနေတဲ့ Pass ဆိုရင်တော့ တန်ဖိုးကိုရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဝင်စားသူများ အကောင်းအထည် ဖော်ကြပေတော့။
သများ ကတော့ ကြားဖဲ ကိုရအောင် စောင့် နေတာမို့ ဖဲဝိုင်းထဲ က မထွက်နိုင်သေးတဲ့ ဘဝ။ lol:-)))
Thint Aye Yeik says: ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေတော့ တောင်းထားပြီး အရီးပြောသလို မေးခွန်းတွေတော့ ရှင်းမပြသေးသမို့
သကြီးရဲ့ အဝွှာကတ်ကြီးအကြောင်း ကျနော်လည်း သိချင်နေတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အရီးလတ် ရွာထဲပြန်ရောက်လာပြီ။ ဒါဆို ရွာတော့စည်ဦးတော့မှာပဲ။
မြစပဲရိုး says: ♬♪♭ ♫ ♩ မင်း ဆိုးလို့ ဝ ရင် မင်းမိုက်လို့ ဝ ရင် ဘုရားကျောင်းထဲ မင်းလဲလိုက်လာနော် ♬♪♭ ♫ ♩
ပြုံးညီမရေ အပြင်မှာ ဆိုးလို့ မိုက်လို့ မဝ သေးတာမို့ …….
ပြောသာပြော တစ်ခြားသိုးမဲဟောင်းကြီး တွေလဲ ယိုင်ထိုးထိုး နဲ့။ lol:-))) (လောလောဆယ် ခေတ်စားနေတဲ့ သီချင်းလေးမို့)
ဦးကြောင်ကြီး says: မြစပဲရိုး လှဆဲဖြိုး သ..ရဲမျိုး င..သလဲထိုး